トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "Rufu", iro shamwari manzwiro?
vachishandisa kusvika 3500 Yen zvinorehwa
nyanzvi kufembera of "Grim Reaper" neizvi nzvimbo usununguke yokunyatsoongorora anobuda Grim Reaper, vanhu vanonzwa kutya kunowanzoitika. Zvisinei, ngatiende nechokwadi chokuti Grim Reaper haisi chero nenzira vanomirira rufu.
"Grim Reaper" muna
vachishandisa, Toka kupera zvinhu, zvinoreva kuti mugumo. In aibuda zvakafanorongwa kuti havakwanisi kuita woga, kana panewo chokuti ake ezvinhu zvinofadza pamwe chinangwa, ndizvo vanodawo kukurumidza kugumisa mamiriro ezvinhu sezvo kushungurudzika uye kurwadziwa.
Kufa makadhi, zvakadaro zvose ezvinhu, tine pfungwa kuti kuenda kuguma iri kuerera kuti mirayiridzo itsva. Large iri kuerera, yavo uye simba, asi nesimba kana chinowanzoonekwa kunyange kuti, chokwadi chokuti iri muitiro ikachinja, kunorevawo kuti pakachinja yasvika.
aibuda guru zvaitika, nekuti haugoni kumira munhu, pane kurwisa dambudziko, kugamuchira zvaitika uye kusiya muviri iyerere, kana vakaedza refocus pakuti, tsvaka zvose iripo wekushanduka zvingava zvakanaka kuva.
Death kadhi munhu akanaka nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva "Rufu" ndizvo zvakanaka nzvimbo, kushanya chiratidzo chokuti kushanyira ari kuchinja Nezvagara Zviripo, izvo kurwadziwa kana kurwadza zvinoreva kuti. Kana
rudo, kuti zvakadai kana iye ari rudo rwake, unogona kubata kunyange uprofita kuti aputse naye chete zvichida, imi makanga munhu anenge vakaravira kutambudzika mupfungwa yakadaro aidanana wake, zvichava zvinogona kuonekwa mupfungwa kuti mugumo uri kuuya marwadzo.
Kana kadhi iri vakabuda, saka kure manzwiro ake kuti dambudziko iwe, pakupedzisira zvinoratidza kuti kudzoka wenyu yepakutanga. The dambudziko Isa kuti vanobatana maoko, muno kurarama nokuonga kumativi inopenya uye vadzosere manzwiro ake nokukurumidza.
Death kadhi iri neizvi nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva "Rufu" ndiro neizvi nzvimbo, zvinoreva kuti kutarisira kuti chinhu chitsva kure rimwe danho kubva iyezvino une. Kana
rudo, manzwiro ake varege zvakanaka wakanyatsokodzera iwe zvinosuruvarisa. Uye yakaguma muna zvinorwadza rusina kukwana mberi rudo, ungave nani zvakanaka maziso ayo pamusoro perimwe wechirume, mune imwe nyaya apo pane kuti vanonzwa kurwadziwa ukama naye, inodzokorora ukama pachayo naye nani refocus upenyu itsva, kuti ave ndinoiitawo kwandiri.
zvakare vakazvipira kuramba Nezvagara Zviripo kuitira kuderedza nzvimbo kadhi iri panze, hakusi kusarudza akachenjera hombe chokubuda wematambudziko. Dzokorora musana zvose pokutangira, tinofanira rikatsausirwa.